အားပေးခဲ့တဲ့ ပွညျသူ ပရိသတျတှကွေား ဝဖေနျမှုမွငျ့တကျနတေဲ့ စှမျးဇာနညျ ရဲ့ ” တောကျ “ – Shwe Likes
မငျးသား စှမျးဇာန ညျကတော့ ဇာတျသ ဘငျလော ကမှာ ပရိသတျတှအွေ ကိုကျဖွဈအောငျ ဖြျောဖွနေိုငျခဲ့သွူ ဖဈပွီး မွနျမာဇာတျလ မျးတှထေဲ မှာလညျး အနုပညာမော ငျနှမတှနေဲ့အ တူ ကရြာဇာတျရုပျ ကနေ ပိုငျပိုငျနိငျနိုငျ သရုပျဆောငျနိုငျသူ ဖွဈပါ
တယျ…စှမျးကတော့ အရငျကာလ မြားဆီက ကနျြးမာရေး အခွအေနခေဏ နားနခေဲ့ပမေဲ့ ခုခြိနျမှတော့ စှမျးက ဇာတျသဘငျက ညီငယျ ညီမတှကေို အလုပျ လကျမဲ့ မဖွဈစရေေးအတှကျ အဖှဲ့သား မြားနဲ့အတူ ပြျောပြျောရှငျရှငျနဲ့ အလုပျတှပွေနျလုပျနပွေီပဲ ဖွဈပါ
တယျ။ စှမျးက အနုပညာအ လုပျကနေ ပြောကျကှယျ သှားတာကွာပမေဲ့ အလုပျတှကေိုပွနျလုပျလာပွနျတော့လညျး ပရိသတျက အရငျကလို အားေ ပးဆဲဖွဈပါတယျ။မွနျမာ နိုငျငံမှာ ဖွဈနတေဲ့အခွအေေ နတှမှေတော့ စှမျးက ပွတျပွတျသားသားနဲ့ဘယျ ဘ ကျကမှ မ
ရပျတညျဘဲတိတျဆိ တျနခေဲ့လို့ ပွညျသူပ ရိသတျတှကေ အားမလိုအား မရ ဖွဈခဲ့ကွပါတယျ.. ဒါပမေဲ့လညျး စှမျးက ဖေ​ဖျောဝါရီ (၁)ရကျ​နမှေ့ စတငျကာ အသုံးပွု ​နေ​သော လူမှုကှနျယကျ Facebook Media ​ပျေါတှငျ ဘုရား၊တရား၊ဘာသာ​ရေး အ​ကွောငျး​မြား
သာ မြှ​ဝခေဲ့ပွီး ယခုမှ ​”တောကျ”တဈလုံးအသုံွး ပုကာ ပွနျ​ပျေါလာသဖွငျ့ ခွံစညျးရိုး ခှထိုငျလိုသူ ဆိုပွီး ​ဝဖေနျမှု မွငျ့မား​စှာ ​ဝဖေနျခံနရေသူ ဖွဈပါတယျနျော.. ပရိသတျကွီးလညျး စှမျး ဘယျအတှကျနဲ့တောကျ ခေါကျနတေယျဆိုတာကို ခနျ့မှနျးပေးကွပါအုံးနျော.. Source: Swam Zarni
မင်းသား စွမ်းဇာန ည်ကတော့ ဇာတ်သ ဘင်လော ကမှာ ပရိသတ်တွေအြ ကိုက်ဖြစ်အောင် ဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့သြူ ဖစ်ပြီး မြန်မာဇာတ်လ မ်းတွေထဲ မှာလည်း အနုပညာမော င်နှမတွေနဲ့အ တူ ကျရာဇာတ်ရုပ် ကနေ ပိုင်ပိုင်နိင်နိုင် သရုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ပါ
တယ်…စွမ်းကတော့ အရင်ကာလ များဆီက ကျန်းမာရေး အခြေအနေခဏ နားနေခဲ့ပေမဲ့ ခုချိန်မှတော့ စွမ်းက ဇာတ်သဘင်က ညီငယ် ညီမတွေကို အလုပ် လက်မဲ့ မဖြစ်စေရေးအတွက် အဖွဲ့သား များနဲ့အတူ ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နဲ့ အလုပ်တွေပြန်လုပ်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါ
တယ်။ စွမ်းက အနုပညာအ လုပ်ကနေ ပျောက်ကွယ် သွားတာကြာပေမဲ့ အလုပ်တွေကိုပြန်လုပ်လာပြန်တော့လည်း ပရိသတ်က အရင်ကလို အားေ ပးဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့အခြေအေ နတွေမှတော့ စွမ်းက ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ဘယ် ဘ က်ကမှ မ
ရပ်တည်ဘဲတိတ်ဆိ တ်နေခဲ့လို့ ပြည်သူပ ရိသတ်တွေက အားမလိုအား မရ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်.. ဒါပေမဲ့လည်း စွမ်းက ဖေ​ဖော်ဝါရီ (၁)ရက်​နေ့မှ စတင်ကာ အသုံးပြု ​နေ​သော လူမှုကွန်ယက် Facebook Media ​ပေါ်တွင် ဘုရား၊တရား၊ဘာသာ​ရေး အ​ကြောင်း​များ
သာ မျှ​ဝေခဲ့ပြီး ယခုမှ ​”တောက်”တစ်လုံးအသုံြး ပုကာ ပြန်​ပေါ်လာသဖြင့် ခြံစည်းရိုး ခွထိုင်လိုသူ ဆိုပြီး ​ဝေဖန်မှု မြင့်မား​စွာ ​ဝေဖန်ခံနေရသူ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. ပရိသတ်ကြီးလည်း စွမ်း ဘယ်အတွက်နဲ့တောက် ခေါက်နေတယ်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းပေးကြပါအုံးနော်.. Source: Swam Zarni